Ny fiarovana ICloud dia manasarotra ny tsena faharoa | Vaovao IPhone
Vaovao IPad | | iCloud, iOS 7
Mahaliana anao ve ny mividy iPad faharoa na iPhone? Ireo fitaovana teknolojia dia manana tsena lehibe faharoa, ary Apple no tadiavina fatratra. Ny fividianana iPad na iPhone mandritra ny fotoana fohy amin'ny vidiny mirary dia fotoana mety, saingy mitandrema tsara, satria mety hahita olana lehibe ianao noho ny rafitra fiarovana vaovao izay nampiharin'i Apple tao amin'ny iOS 7, matotra fa tsy ho azonao ampiasaina ilay fitaovana, na hamerina azy io hamafana ny ao anatiny sy hanomboka hampiasa azy io.
Tsarovy fa niaraka tamin'ny iOS 7 nisy rafitra fiarovana iCloud vaovao: izay fitaovana manana «Hikaroka ny iPad»Na iPhone nohahetsika Tsy azo averina amin'ny laoniny izany raha tsy miditra ny solonanarana sy ny teny miafina aloha an'ny mpampiasa nampandeha azy. Na dia manandrana mamerina amin'ny laoniny ilay fitaovana aza ianao dia hangataka aminao ny tenimiafinao hampiatoana azy io, na avy amin'ny fitaovana ampiasainao izany na avy amin'ny iTunes. Na ny fametrahana azy amin'ny maody DFU aza tsy mandeha. Mila ilay mpampiasa teo aloha ianao mba hanome anao ny angon-drakitr'izy ireo mba hampiasa ilay fitaovana. Ilaina ihany koa ny fanananao ny angon-drakitrao raha manandrana miditra amin'ny menio Settings ianao ary manafoana ny fiasa "Find my iPad" (na iPhone).
Izany tokoa Alohan'ny hividianana fitaovana iOS dia tsy maintsy hamarinintsika tsara fa ny mpivarotra dia nanidy io safidy io ho antsika. Amin'izany no hialantsika olana, azontsika atao ny mamerina amin'ny laoniny ny fitaovana amin'ny fandriam-pahalemana tanteraka ary manampy ny angon-drakitra, ary mazava ho azy, mampihetsika io safidy io, izay tsy hanampy antsika fotsiny hitady ilay fitaovana raha misy fatiantoka na fangalarana, ary manome antoka koa fa tsy misy olona afaka mampiasa izany raha tsy misy ny angona iCloud.
Matahotra mafy aho fa afaka fotoana fohy dia hanana olona maro manana olana amin'ity karazana ity isika, ary indrisy, ny vahaolana tokana azontsika atolotra dia Mifandraisa amin'ny tompony teo aloha ary mangataha ny angona iCloud.
Fanazavana fanampiny - Fametrahana ny Find my iPad amin'ny iOS 7
Làlana feno mankany amin'ny lahatsoratra: Vaovao IPhone » Apple products » iCloud » Ny fiarovana ICloud dia manasarotra ny tsena faharoa
Wirelezz dia hoy izy:
Tsy mila manome anao ny angon-drakitry ny tompona izy ireo, azon'ny tompony atao ny manafoana azy io lavitra avy amin'ny tranokala icloud.
Valiny amin'i Wirelezz
Marina ny anao, tsy nomeko tsara izany.
Manomana lahatsoratra miaraka amin'ny antsipiriany momba ny fanaovana azy izahay. Saingy ilaina hatrany amin'ny fifandraisana amin'ny tompony teo aloha izany.
ahoana no hilazana amiko fa manana olana mitovy amiko ihany aho
Salama, manao ahoana ianao? Raha ny marina, raha azo atao ny manala an'io kaonty io amin'ny id icloud, nefa lafo dia lafo, manokan-tena aho hanafaka iPhones sy hanasaraka ny kaonty apple ap amin'ny iPhone raha mbola tompona ianao ary tsy tadidinao ny teny miafinao, maninona no mamafa ny kaonty iCloud id raha nangalarinao ny fitaovana tsy ara-dalàna, io serivisy io dia ny mamafa ny kaonty id an'ny tompona teo aloha fotsiny fa tsy manafaka ny iphone hampiasana azy amin'ny orinasa serivisy hafa fotsiny io serivisy io. ilay tany am-boalohany ary TSY MANALA NY TATITRATRA halatra dia mamafa ny kaonty id Apple fotsiny, raha misy olona liana amin'ny serivisiko dia afaka mifandray amiko amin'ny mailako izay eduardo.conexcelreparaciones@hotmail.com
Gladiatera Vs Spartacus dia hoy izy:
Salama, nividy ipad tanana faharoa aho, ary nosakanan'ny icloud izany ary nanandrana namerina azy io saingy nangataka tamiko ny kaonty icloud an'ny tompona teo aloha izy ary tsy fantatro ny nomeraon-telefaoniny na ny momba azy ...
Ahoana no hamahako ny olana ???
Navalin'i Gladiators Vs Spartacus
hello yeah leg yon manana an'io koa aho fa nangataka kaonty gimail toa ny lasa
Ahoana ny fomba hamafana ireo hafatra ao amin'ny iOS 7